Jordania: Vita avy any Israely · Global Voices teny Malagasy
Jordania: Vita avy any Israely
Voadika ny 05 Jolay 2010 20:30 GMT
mampisy ady hevitra any amin'ny anjery manotolon'i Hashemite any Jordan ireo akanjo famoahana vita avy any Israely
Mandrara tanteraka ny fanafarana entana avy any Israel ireo firenena Arabo taorian'ny adin'i Arabo -Israely tamin'ny 1948. Na dia efa tsy dia ampiharina loatra intsony aza ny fandraràna (afa tsy any Siria sy Libanona), dia mbola mampametra-panontaniana sy fanairana ny fahitana ireo marika Made in Israel amin'ireo vokatra eny amin'ireo fivarotana. Ilay teratany Jordaniana Osama Al Romoh (Ar) nanokatra adihevitra iray rehefa nahalala fa ireo akanjo famoahana mpianatra amidin'ny Anjerimanontolon'i Hashemite amin'ireo mpianany dia voafono anaty kitapo misy ny marika Made in Israel misoratra eny amboniny.
Nanoratra mikasika ny fahatairany izy:
Amin'ny tsy fisalasalana no itenenako fa mbola lehibe noho ny ahy tamin'ny nahenoako izany ny hatairan'ireo mpianatra, izay naka ny akanjo mirebarebany, tamin'ny fahitana ity marika Made in Israel amin'ireo kitapo nisy ny akanjon'izy ireo! Tsy zakako ny mamaky ny teny hoe Israel ary mahita vokatra vita avy any!
Mivadika ho fiaretana ny hatairana rehefa manaiky i Al Romoh fa efa misy tokoa ireo entana avy any Israely amidy any Jordan ka an'ny mpanjifa no manao safidy:
Tsy izao no fotoana voalohany nahataitra ireo teratany Jordaniana amin'ny fisian'ireo entana Israeliana amidy tsy amin-tahotra sy malalaka eny amin'ireo fivarotana ao an-tanàna. Ohatra, misy ireo karazana voankazo izay amidy eny amin'ireo vondron-toeram-pivarotana lehibe ary na dia eny amin'ireny mpivarotra mandehandeha ireny koa aza, izay ahitana ny marika “Made in Israel” mipetaka eny amin'ny tsirairay amin'ireo voankazo ireo. Ny Minisitry ny Fambolena Jordaniana dia nanazava fa ireo entana avy any Israely rehetra dia misy ny marika Made in Israel mipetaka eny amin'izy ireny ary manana safidy ny hividy na tsia an'izany entana izany ireo mpividy.
Misy fifanekem-pihavanana eo amin'i Jordania sy Israely, hoy ihany ilay mpitoraka blaogy:
Mazava izany, raha manaiky isika fa antony iray mahatonga ireo entana vita avy any Israely misy aty Jordania ny fifanekem-pihavanana nataon'i Jordania sy Israely sy ny fifanarahana ara-toekarena misy eo amin'ireo firenena roa ireo, dia tsy afaka kosa isika hanaiky fampitondrana akanjo mirebareba israeliana an'ireo mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo tahaka ny fitarihana ireo taranaka ho avy hanaiky ny zava-misy mipetraka eo ambonin'izany. Ny zavatra tena mahagaga dia ny lazan'ny Anjerimanontolon'i Hashemite amin'ny fanoherany ny fanaovana marimaritra iraisana (amin'Israel) noho izany inona ny fanazavany amin'ny fanaovany ireo mpianatra ho toy ny adala?
Manohy i Al Romoh:
Iray amin'ireo mpiandraikitra no namoaka fanambarana milaza fa ireo akanjo mirebareba dia vita tany amin'ny tananàn'i Al Hassan Town any Irbid, Jordan, ary ireo kitapo nasiana azy ireo dia vita tany Israely. Manokatra adihevitra hafa indray izany: Tsy mahay manamboatra kitapo ve ny i Jordania?
Ho famaranana, dia nanoratra izy:
Miantso ireo mpianatra rehetra aho handà ireo akanjo famoahana ireo izay amidin'ny Anjerimanontolon'i Hashemite ka hividy ireo vita aty an-toerana. Raha tsy mahita ireo vita aty an-toerana izy ireo, dia afaka mividy ireo akanjo vita avy any Siria, ary miakanjo samboady misy ny soratra “Not Made in Israel” mba hahazoan'izy ireo toky fa nahavita ny fianarany ry zareo ary hiditra amin'ny fiainana miatrika asa amin'ny fahatsiarovana mendrika.